Tarot eGranada | Eyona ndawo ihamba phambili kunye nokuSebenza kweKhadi | 2019
Sikho Ityhubhu.line, i-clairvoyance, ukuxela kwangaphambili kunye neengcali ze-tarot eGranada (Andalusia). Iingcali zeTarot kwasekuzalweni kwaye ziyinyani ngokugqibeleleyo uqeqeshelwe ukubona okudlulileyo okwangoku nakwixesha elizayo. Siphendula onke amathandabuzo ebomini bakho ukuze ukwazi ukukhokela ikamva lakho kunye nendlela yakho ngaphandle koloyiko lwento enokwenzeka.
Wethu Imibuzo ye- amakhadi e-tarot eGranada Banokwenziwa nge-Intanethi (kwi-Intanethi) okanye ngobuqu, nge-100% yeminxeba yasimahla okanye kwi-WhatsApp. Utolika ngokuchanekileyo amakhadi eetotot Akululanga, ke siya kukhokelwa yeyakho ingelosi yokukhokhelaUkunxibelelana nendalo yomama, indalo iphela, usebenzisa iMajor neMinor Arcana.
1 Gcwalisa i-tarot isasazeka eGranada
2 Iimboni kunye neeTarotists eGranada
Gcwalisa i-tarot isasazeka eGranada
Ukuba uziva ukuphelelwa lithemba kunye noxinzelelo malunga nengxaki yokwenyani kwaye ngoku ebomini bakho, uziva ukuba i-Universe ayikho kwicala lakho kwaye uyayifuna thetha namakhadi kunye namakhadi, Siza kukunceda nge ukuqhuba ngokukhululekileyo ngokupheleleyo kwaye wena. E-Andalusia sine eyona tarotists kunye neemboni ke unokuyifumana indlela yakho nolonwabo.
Awusoze uphinde ulahleke kobu bomi, shiya uxinzelelo lwangaphambili kwaye ujonge okwangoku nakwilixa elizayo ukuze ukwazi ukulawula ikamva lakho.
Iimboni kunye neeTarotists eGranada
Indima ye iimboni kunye nabafundi be-tarot Kukusebenzisa amakhadi ngokufanelekileyo ukunceda abanye kwaye unike iimpendulo ezichanekileyo. Ukuvumisa komgangatho kwenziwa ngalo Amakhadi angama-78 ahlulwe ngama-56 Omkhulu uArcana kunye ne-22 Minor Arcana. Ukudibana kwi-Intanethi nakubuso ngobuso eGranada nge umfundi olungileyo we-tarot eGranada iya kuba lolona khetho lufanelekileyo ebomini bakho.
Sondela kwi umhlaba womoya ngamagunya e-tarot, ngendlela eya kuthi ibe ye-100% ichanekile. Yimangaliswe ziimpendulo ze Iitshathi ze-astral, kwaye ndiyayoliswa yi uqikelelo lwetotot ebonakalayo.